Ball mabheyaringi, Motor mabheyaringi, mabheyaringi Manufacturer, Good Quality mabheyaringi - Anrui
Deep paburi bhora mabheyaringi
Tapered chinotenderera mabheyaringi
Other customized mabheyaringi
Irikupa michina mabheyaringi
Household mudziyo mabheyaringi
Anrui Holding Group Co., Ltd., Iri kambani boka munyaya mabheyaringi akatendeuka, kupisa kurapwa, nokuikuya uye ungano uyewo mabheyaringi vachikuya muchina kurimwa dzedu muchiso WWI. Somunhu nyanzvi rakadzika paburi bhora mabheyaringi mugadziri, isu kudzora unhu hwedu kubva zvokunyama, muitiro pakuguma chigadzirwa. WWI mabheyaringi anoshandiswa nevakawanda kuti injini, motor-motokari, conveyor hurongwa, erevheta uye escalator, mhuri midziyo yemagetsi, injini renyukireya uye etc. kuti nyika tenderera yakavimbika.
Household midziyo yemagetsi
Tinopa yepamusoro zvinovimbisa 1 gore pasi kwomuzvarirwo kushanda ezvinhu. kana chete riri vakakundikana kunokonzerwa kubereka unhu pagore, WWI angada yokutsiva rakakundikana inobereka pamwe kubereka mutsva mumwe nomumwe.
Factory yedu yakura kuva Premier ISO / TS16949: 2009 vaipupurirwa akaigadzira High quality, Cost-Zvinobudirira zvigadzirwa
WWI ari nyanzvi mabheyaringi mugadziri. Tine zvachose 6 mafekitari iri Huangshan, Hangzhou, hubei azvaitwa.